Kodzero-dzevanhu, 25 Chikumi 2017
Svondo 25 Chikumi 2017
Vaimbove Mutungamiri weBotswana VaQuett Masire, Vanoshaya.
VaMasire ndivo vakave mutungamiri weBotswana wechipiri kubva kuna VaSeretse Khama. VaMasire vakatungamira Botswana kubva muna 1980 kusvika muna 1998 apo vakazoenda pamudyandigere.
Muimbi Dickson "Chinx" Chingaira Anoradzikwa kuMarinda ekuGlen Forest
Munyori musangano revakarwa muhondo yerusununguko, reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, VaVictor Matemadanda, vati kunyange hazvo Chinx asina kupihwa ruremekedzo rwakafanira, mapfupa aChinx achamuka.
Murungu Anotorerwa Purazi Rake neChisimba kwaRusape
Mapurisa nevechidiki veZanu PF ava vanonzi vakamanikidza vashandi vemupurazi raVaSmart pamwe nevavakidzani kuti vavabikire sadza nenyama yembudzi yavakaurayiswa nemapurisa nevechidiki veZanu PF ava vamwe vavo vachikanda mbatya dzaVaSmart nemhuri yavo panze.
Chikumi 22, 2017
Veruzhinji Vofarira Kushandiswa kweEcocash Vachibhadhara Mari dzeTollgate Fees
Mumwe wevanhu vari kufarira chirongwa chaparurwa nhasi ichi, VaFungai Gutu, vati zvirinyore kushandisa Ecocash sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika.
Kudomwa kweMagamba eNyika Kokonzera Mutauro
Munyika mune makakatanwa akasimba panyaya yekuti muimbi ane mukurumbira, Cde Chinx, igamba here kana kuti kwete. Bato reZanu-PF rakati igamba rehondo kana kuti liberation war hero nekudaro haakwanise kuvigwa pamarinda eHeroes Acre.
Zimbabwe Inomutsiridza Humhizha hweKuuchika
Doctor Mhlanga vanoti pari zvino vari kubatsira vanhu vakaroorana chete uye kutaura kuno pane mwana akazvarwa nenzira iyi muna Kubvumbi ari kurarama zvakanaka chose.
Chizvara cheZimbabwe Chofara Kusangana naNeymar Shasha yeNhabvu
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe VaIsaac Nyaumba vanoti vari kufara zvikuru nekuwana mukana wekusangana uye kutorwa mufananidzo nemutambi wenhabvu ane mukurumbira zvakanyanya pasi rose Neymar.
Bato raAmai Mujuru Ropomerwa Mhosva yeKutungamidza Nyaya dzeMarudzi
Vanhu ava vakapa zvikonzero zvakasiyanasiyana, zvinosanganisira nyaya dzemarudzi pamwe nezvipoka-zvipoka mubato iri.
Cde Chinx Vononoka Kuvigwa neKunetsana kweMhuri Yavo neZanu-PF paNyaya yeHugamba
Nyaya yekusawirirana pakati pemhuri yemuimbi Cde Chinx nebato reZanu-PF kuti oitwa gamba renyika here kana kuti kwete yapa kuti mufi anoneke kuvigwa. .
Zimbabwe Yotsvaga Mari Kuti Ibatsire Vapoteri
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka, Amai Prisca Mupfumira, vati hurumende iri kukumbira mari inosvika mamirioni gumi. Amai Mupfumira vati vapoteri vakawanda vari kubva kuMozambique uko varikubva vakabata mawoko chete.